Apple waxay daabacdaa safar hagitaan leh warka iPhone -ka cusub 13 | Wararka IPhone
Boos celinta iPhone -ka cusub ee 13 ayaa bilaabmay Shalay iyo 24 -ka Sebtembar, cutubyada ugu horreeya waxay bilaabi doonaan inay u yimaadaan milkiilayaashooda. Apple waxay dooratay taleefanno casri ah oo cusub oo ay ku shaqeyneyso A15 Bionic chip cusub iyo kaamirooyin dib loo habeeyay oo awood u leh inay ku duubto fiidiyowyada ProRes iyo xitaa duubista darbooyin caqli badan iyagoo ku kala beddelaya kuwa madmadow leh qaabkeeda Shineemada. In kasta oo dhammaan wararka si fiican loo sharraxay loona horumariyey degelka rasmiga ah, Apple waxay daabacday fiidiyow cusub oo ah qaab safar la hagayo oo iftiiminaya waxyaabaha ugu waaweyn ee iPhone 13.
Noocyada ugu waaweyn ee iPhone 13 waxay ka muuqdaan socdaalka Apple hago
Sawirku wuxuu qiimihiisu yahay kun eray iyo in Apple ay garato wadnaha. Taasi waa sababta aad u dhejisay a Socdaal la hagayo si loo muujiyo waxa ku cusub iPhone 13 iyo iPhone 13 Pro noocyadeeda oo dhan. Fiidiyowga oo dhan waxaan ku arki karnaa sida astaamaha farsamo ee aaladaha loo soo bandhigay si tallaabo loo qaado. Waxaad arki kartaa qaabka Shineemada oo ficil ahaan ah, tusaalooyin ka mid ah iska caabbinta iPhone 13 lagu tijaabiyo ama tusaalooyinka hawlgalka kaamirooyinka cusub.
iPhone 13 iyo iPhone 13 Mini, waxaan kuu sheegnaa dhammaan faahfaahinta
Dhab ahaantii, socdaalku wuxuu u qaybsan yahay hordhac tilmaamaha farsamo ee afarta nooc ee la heli karo. Marka xigta, waxaan sii wadnaa inaan tusno hawlgalka habka Shineemada iyo inaan hubinno aaladda aaladda iyo iska caabbinta dareeraha. Intaas ka dib, shaashadda cusub ee Super Retina XDR ayaa la iftiimiyay waxaana la falanqeeyay ismaamulada baytariyada. Iyo, ugu dambayntii, waxaad marin u heli doontaa qaybta sawir -qaadista ee qaababka sawir -qaadista, zoominta dhijitaalka ah iyo qaabka Macro ee iPhone 13 Pro ay ka soo baxaan.
Tani waa hab xiiso leh oo ka timaada Apple si loogu soo dhaweeyo iPhone 13 faahfaahinta dadka isticmaala iyada oo la adeegsanayo fiidiyow la taaban karo oo la hagayo halkaas oo adeegsadayaasha iyo shaqaalaha Big Apple lagu arki karo oo hagaya shaqada. Waxay u badan tahay in aaladaha mustaqbalka aan ku arki doonno wax la mid ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Terminalka IPhone » iPhone 13 » Apple waxay daabacdaa socdaal hagitaan leh warka cusub ee iPhone 13